ပုံစံ PPGI ( သစ်တော, စကျင်ကျောက်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စျေးကွက်အတွက်ပန်းပွင့်ပုံစံ ppgi) - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
အဆင့်: DC01, DC02, DC03
Aluzinc/zinc သွပ်: THE 35-11-, Z35-200
သုတ်အမျိုးအစား: 15+5 က (ON, HDP, PVDF)
အမျိုးအစားများ: အားလုံး, ပြင်ဆင်ထားသောထုတ်ကုန်များ တက်ဂ်: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
အရောင်ခြယ်ထားသော Printed Steel Coil အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်:
အရောင်ခြယ်ထားသောသံမဏိကွိုင်, print coil ဟုလည်းခေါ်သည်, သုတ်ဆေးကိုအလွှာဖြင့်အုပ်ပြီးဖုတ်ထားသောပုံစံကို gravure နည်းပညာများ သုံး၍ ပုံနှိပ်သည် ,ထို့နောက်ကြည်လင်သောယွန်းအလွှာတစ်ထပ်ကိုအုပ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖုတ်ပါ, အရောင်ခြယ်ထားသောပုံနှိပ်ထားသောသံမဏိကွိုင်ကိုရရှိသည်.
ပုံစံများ: ပုံစံများသည်ပုံမှန်သစ်သားပုံစံဖြစ်သည် (ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း). ညှိနှိုင်းမှုများနှင့်သုတေသနမှတဆင့်ဖောက်သည်များထံမှအထူးလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်.
မင်ရည်သည် ပို၍ အသုံး ၀ င်သည်. အများစုသည်ဆေးမင်ရည်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်.
Metal Embossed Color-coated Steel coil အဓိပ္ပာယ်:
လျှောက်လွှာ: သတ္တုဖောင်းကြွအရောင်အုပ်ထားသောသံမဏိကွိုင်ကို၎င်း၏ stereoscopic အထင်အမြင်ကောင်းများကြောင့် indoor decoration panel များအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်.
သတ္တုဖောင်းကြွအရောင်ကာထားသောသံမဏိကွိုင်ကိုအပေါ်ယံအမျိုးအစားများဖြင့်ကန့်သတ်မထားပါ. သို့သော်အောက်ခံအထူသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၀.၆၀ မီလီမီတာထက်မပိုပါက၎င်းသည်သတ္တုကိုပုံပျက်ရန်ခက်ခဲစေသည်.
Jianglin PPGL ၏အားသာချက်များ
1.ယခင်က Jianglin သည် PPGL ထုတ်လုပ်မှုမှစတင်သည်, နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်, ငါတို့မှာလုံလောက်တဲ့လက်တွေ့ထုတ်လုပ်မှုအားသာချက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးပြီ ။Jianglin ဟာပန်းချီပုံသေနည်းကိုသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်. ကွဲပြားခြားနားသောလေထုအပေါ်အခြေခံသည်, Jianglin သည်ဖောက်သည်များအားလက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်နှင့်ရွေးချယ်မှုပေးနိုင်သည်.
2. ပူနွေးသောကွိုင်မှ PPGL သို့, Jianglin တွင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့လျှော့ချရန်တစ်နေရာတည်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောစင်တာရှိသည်.
3. Tianjin ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင်တည်ရှိသည်, စက်ရုံမှ Tianjin ဆိပ်ကမ်းသို့သာယူပါ 40 မိနစ်များ.
4. နာမည်ကြီးအာမခံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်နာမည်ကြီးသည်, Jianglin နှင့်အတူကျော်ကျော် 20 နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၀ ယ်သူအားစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအပေါ်အာမခံချက်ပေးနိုင်သည်.
အဆင့် TDC51D + AZ, TDC53D + AZ, TS250GD + AZ,TS300GD + AZ, TS350GD + AZ, TS550GD + AZ
ပန်းချီကားအမျိုးအစား ON, ဂျီဒီပီ, PVDF
ပန်းချီကားအထူ 15+5/5+7က, 20+5um/7+10um သည်ဖောက်သည်များအပေါ်အခြေခံသည်’ လိုအပ်ချက်
အဆောက်အ ဦး များနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ မိုးမိုး, ဘေးတိုက်, ခါးပန်း, ပြတင်းပေါက်များ, မိုးတံခါးများ, အမျိုးမျိုးသောပွဲစဉ်များ, အပိုင်းများ, မျက်နှာကျက်များ, ခြံစည်းရိုး, ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေသန့်စင်စက်များ, ပိုက်များ, Marine Panels များ, ဆီစစ်, Dash ပြားများ.
ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံဆီစက်များ အပူပေးစက်, ဟင်းချက်မီးဖိုများ, ရေနံဆီကန်များ, ရေပူသုံးပစ္စည်းများ, ပြွန်.
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း မီးဖိုများ, တောင်တန်းများ, နစ်မြုပ်, မီးဖိုချောင်ယူနစ်များ, စင်များ, အိမ်သာများ, Cooker Wrappers များ.
လျှပ်စစ်နှင့်အလင်းရောင်သုံးပစ္စည်းများ အဝတ်လျှော်စက်များ, ရေခဲသေတ္တာများ, Room Coolers များ, မီးချောင်းအိမ်များ, သေတ္တာများပြောင်းပါ, မော်တာကိစ္စများ, ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့များ, မိတ္တူကူးစက်များ.
ပရိဘောဂနှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများ သံမဏိပရိဘောဂ, အပိုင်းများ, ကုလားကာ, နံရံများ, လိုက်ကာ.
စိုက်ပျိုးရေး အခြောက်ခံစက်များနှင့်အခြားလယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ, ဖန်လုံအိမ်များ, Silos, ကျီ, ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး.
ကွန်တိန်နာများနှင့်အခြားအရာများ. အဝယ်စက်များ, ပြသမှုများ, Cans, ဖိအား, မျိုးလည်းရှိတယ်, ဆိုင်းဘုတ်များ.
တရုတ် Q/FWG001 Baosteel Q/BQB402/403 ဂျပန် JISG3141 U.S ASTM ဥရောပ EN10130-1999
မေး/HYB201-08 မေး/HYB202-06 JIS G3302 Aluzinc JIS G 3321 EN10327-04 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
SGCC – SGCC/(SGHC) SGLCC DX51D + Z – CS အမျိုးအစား A/B/C
SGCD – SGCD SGLCD DX52D + Z – FS အမျိုးအစား A/B
– S280 SGC340 – – S280GD + Z SS275/ အဆင့် 40
– S350 SGC440 – – S350GD + Z SS340/ အဆင့် 50
3.Zinc Coating အကိုးအကား
GB/T2518-2004 JIS ဂျီ 3302 မေး/HYB201 EN10327 ASTM A653M
သွပ်အပေါ်ယံပိုင်း 001 Z001
ပစ္စည်းအခြေခံ 02 SGCC SGCC DX51D + Z CS အမျိုးအစား A/B/C
03 SGCD SGCD DX52D + Z
4. Prepainted သွပ်ရည်စိမ်ထုတ်ကုန်အဆင့်နှင့်လျှောက်လွှာ
PPGI/GL Steel grade အခြေခံသတ္တုအဆင့်အတန်း လျှောက်လွှာ
TDC51D + Z DC51D + Z ပုံမှန်အသုံးပြုမှု
TDC52D + Z DC52D + Z ပုံဆွဲခြင်း
TDC53D + Z DC53D + Z နက်ရှိုင်းသောပုံဆွဲ
TS280GD + Z S280GD + Z ဖွဲ့စည်းပုံ
TS350GD + Z S350GD + Z ဖွဲ့စည်းပုံ
TS550GD + Z S550GD + Z မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံ
TDC51D + AZ DC51D + AZ ပုံမှန်အသုံးပြုမှု
TDC52D + AZ DC52D + AZ ပုံဆွဲခြင်း
TS250GD + AZ S250GD + AZ ဖွဲ့စည်းပုံ
TS300GD + AZ S300GD + AZ ဖွဲ့စည်းပုံ
TS350GD + AZ S350GD + AZ ဖွဲ့စည်းပုံ
TS550GD + AZ S550GD + AZ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံ
Jiang Lin Steel Corporation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမိတ်ဆက်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ထုတ်လုပ်ခြင်း Galvanizing ထုတ်လုပ်မှု PPGL ထုတ်လုပ်မှု
Cold Rolling ထုတ်လုပ်မှု
PPGL နှင့် PPGI ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း.
Jianglin PPGL သည်အများအားဖြင့်ပြည်ပမှ ၀ ယ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်, သွပ်အပေါ်ယံအထူပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်လိုအပ်ချက်ရှိသည်.
Jianglin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်းသည် 6S စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတင်းကြပ်စွာကျင့်သုံးနေသည်. အတိတ်အတွက်5အပြင်အချင်း, ကမ္ဘာ့သံမဏိဈေးကွက်သည်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည်, ငါတို့ရောက်နေပြီ 5%-9% ဝင်ငွေတိုးသည်.
– သာမာန်, MOQ forcoilis တစ်ကွိုင် 3-5 တန်ချိန်.
hot-dipped galvanized သံမဏိ(GI ကွိုင်)